(၂၄.၃. ၂၀၂၀) ရက် နေ့လေး မှာ တရော်ကင်ပွန်း နဲ့ ခေါင်းလျှော် ဖို့ မမေ့ ကြနဲ့နော် – GuGuGarGar
အသက် ၁၁၇ �...
(၂၄.၃. ၂၀၂၀) ရက် နေ့လေး မှာ တရော်ကင်ပွန်း နဲ့ ခေါင်းလျှော် ဖို့ မမေ့ ကြနဲ့နော်
Shwe | March 19, 2020 | Knowledge | No Comments
ဘုန်း ကျက် သရေ လာဘ် ပွင့်် ဦးခေါင်း မင်္ဂလာ ပြုရအောင်
အားလုံးမင်္ဂလာပါ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ချစ်ခင်လေးစာကြသော မိသားစုဆွေမျိုး မိတ်သင်္ဂဟအပေါင်း တို့ခင်ဗျာ မနှစ်က တကြိမ်ရေးသားထားသလို မြန်မာနှစ်ရဲ့ ပထမလ ဖြစ်တဲ့ တန်ခူးလဆန်း ၁ ရက်နေ့မှာ ဦးခေါင်း ဆေးမင်္ဂလာပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်….
ရှေးဆို ရိုးစကားလေး နဲ့ အညီ ဆန်းရက် ၁ ရက်မှာ ဦးခေါင်ဆေးရင် ဘုန်းကျက်သရေ မဂ်လာ တိုးပွားပြီ လာဘ်ပွင့်ခြင်း ….ကံကောင်းခြင်း မင်္ဂလာအဖြာဖြာတွေတိုးပွားကြခြင်းအန္တရာယ် ကင်းခြင်းဆိုသည့်အတိုင်း….ယခု တန်ခူးလဆန်း၁ရက်နေ့ ၂၄.၃.၂၀၂၀ရက်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်….
အဲ့ဒီနေ့ မှာ နေ့လည် ၂ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီ အချိန်တွေမှာမြန်မာ့ရိုးရာ တရော်ကင်းပွန်းရည် စစ်စစ်ထဲကို ကွမ်းရွက်၃ရွက်ခြေထည့်ပါ…. သပြေ၃ညွန့်ထည့်ပြီ မိမိတို့ဂြိုလ်ခွင် အလိုက်လာဘ်နေ အရပ်ကို မျက်နှာမူပြီ ဦးခေါင်းဆေးမဂ်လာပြုပေးရပါမည် ။ ဦးခေါင်ဆေး မင်္ဂလာပြုချိန်မှာ ဖိနပ်ချွတ်ပြီးလာဘ်နေ အရပ်တွေကို မျက်နှာမူကာ မိမိစိတ်ထဲမှ သရဏဂုံ ရွတ်ဖတ်ခြင်း ပဌာန်းအကျဉ်း ၃ ခေါက်ရွတ်ဖတ်ပြီးပါက ဦးခေါင်ဆေးမင်္ဂလာ ပြုလုပ်ရပါမည်။
နေ့နံသား သမီးများလာဘ် နေရမည့် အရပ်များမှာ….
တနင်္ဂနွေ မွေးသူများ မြောက် အရပ်
စနေမွေးသူများ အနောက်မြောက်အရပ် တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
မိမိတို့အနေနဲ့ တရော်ကင်းပွန်းစစ်ကို သာမြန် မာ့ရိုးရာထုံစံအတိုင်းဝယ်ယူပြီခေါင်လျှော်ရ ပါမည်။ ယခုခေါတ်ပေါ်နေသော ခေါင်လျှော် ရည်များနှင့် အလွယ်တကူလျှော်ခြင်းမရပါ။ ယုံကြည်စွာ ဦးခေါင်ဆေး မင်္ဂလာပြုသူတို့မှာ ဘုန်းကံမြင့်တက်လာခြင်း ကံမြင့်တက်လာခြင်း အကြံအစည်ထမြောက်အောင် မြင်လာခြင်း … လာဘ်လာဘကပေါများလာ နိုင်ခြင်းအန္တရာယ်ကင်းခြင်း ၊ ရောဂါဘယကင်းဝေးခြင်းဆိုသည့်မင်္ဂလာအဖြာဖြာတွေ ရရှိခံစားနိုင်စေဖို့ဆိုတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများထူးလာနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေး တင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ ။
ဘုနျးကကျြ သရေ လာဘျပှငျ့ ဦးခေါငျးမင်ျဂလာ ပွုရအောငျ
အားလုံးမင်ျဂလာပါ အနယျနယျအရပျရပျမှ ခဈြခငျလေးစာကွသော မိသားစုဆှမြေိုး မိတျသင်ျဂဟအပေါငျး တို့ခငျဗြာ မနှဈက တကွိမျရေးသားထားသလို မွနျမာနှဈရဲ့ ပထမလ ဖွဈတဲ့ တနျခူးလဆနျး ၁ ရကျနမှေ့ာ ဦးခေါငျး ဆေးမင်ျဂလာပွုပေးရမှာဖွဈပါတယျ….
ရှေးဆို ရိုးစကားလေး နဲ့ အညီ ဆနျးရကျ ၁ ရကျမှာ ဦးခေါငျဆေးရငျ ဘုနျးကကျြသရေ မဂျလာ တိုးပှားပွီ လာဘျပှငျ့ခွငျး ….ကံကောငျးခွငျး မင်ျဂလာအဖွာဖွာတှေတိုးပှားကွခွငျးအန်တရာယျ ကငျးခွငျးဆိုသညျ့အတိုငျး….ယခု တနျခူးလဆနျး၁ရကျနေ့ ၂၄.၃.၂၀၂၀ရကျနပေဲ့ဖွဈပါတယျ….
အဲ့ဒီနေ့ မှာ နလေ့ညျ ၂ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီ အခြိနျတှမှောမွနျမာ့ရိုးရာ တရျောကငျးပှနျးရညျ စဈစဈထဲကို ကှမျးရှကျ၃ရှကျခွထေညျ့ပါ…. သပွေ၃ညှနျ့ထညျ့ပွီ မိမိတို့ဂွိုလျခှငျ အလိုကျလာဘျနေ အရပျကို မကျြနှာမူပွီ ဦးခေါငျးဆေးမဂျလာပွုပေးရပါမညျ ။ ဦးခေါငျဆေး မင်ျဂလာပွုခြိနျမှာ ဖိနပျခြှတျပွီးလာဘျနေ အရပျတှကေို မကျြနှာမူကာ မိမိစိတျထဲမှ သရဏဂုံ ရှတျဖတျခွငျး ပဌာနျးအကဉျြး ၃ ခေါကျရှတျဖတျပွီးပါက ဦးခေါငျဆေးမင်ျဂလာ ပွုလုပျရပါမညျ။
နနေံ့သား သမီးမြားလာဘျ နရေမညျ့ အရပျမြားမှာ….
တနင်ျဂနှေ မှေးသူမြား မွောကျ အရပျ
စနမှေေးသူမြား အနောကျမွောကျအရပျ တို့ဖွဈကွပါတယျ။
မိမိတို့အနနေဲ့ တရျောကငျးပှနျးစဈကို သာမွနျ မာ့ရိုးရာထုံစံအတိုငျးဝယျယူပွီခေါငျလြှျောရ ပါမညျ။ ယခုခေါတျပျေါနသေော ခေါငျလြှျော ရညျမြားနှငျ့ အလှယျတကူလြှျောခွငျးမရပါ။ ယုံကွညျစှာ ဦးခေါငျဆေး မင်ျဂလာပွုသူတို့မှာ ဘုနျးကံမွငျ့တကျလာခွငျး ကံမွငျ့တကျလာခွငျး အကွံအစညျထမွောကျအောငျ မွငျလာခွငျး … လာဘျလာဘကပေါမြားလာ နိုငျခွငျးအန်တရာယျကငျးခွငျး ၊ ရောဂါဘယကငျးဝေးခွငျးဆိုသညျ့မင်ျဂလာအဖွာဖွာတှေ ရရှိခံစားနိုငျစဖေို့ဆိုတဲ့ အကြိုးကြေးဇူးမြားထူးလာနိုငျပါတယျဆိုတဲ့ အကွောငျးလေး တငျပွပေးလိုကျပါသညျ။ ။
ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှ လွဲ၍ ပြည်သူများ ပါစပ်နှင့် နှာခေါင်းစည်း (Mask) တပ်စရာ မလိုပါဘူး
မနက်စာ မစားဘဲ နေနေတာ ကြာပီလား ဒါဆို ဒီလိုရောဂါတွေ ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ဆေးဖက်လည်း ဝင်သလို အလှပအတွက်လည်း အသုံးပြုလို့ရတဲ့ အဖိုးတန်ပန်းသီး ရှာလကာရည် ကိုယ်တိုင် အသန့် လုပ်နည်း
အ သက် ကြီး ရင် အိုဇာတာ ကောင်း မကောင်း သိနိုင် မယ့် သင့် ဘယ်ဘက် လက် မလေး
အသက် ၁၁၇ နှစ်ရှိပြီဖြ စ်တဲ့ ကမ္ဘာ့အသက်အ ရှည်ဆုံး လူသားတစ်ေ ယာက်ရဲ့ အသက်ရှည်နည်း လျှို့ဝှက်ချက်
“လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ခန့်ကလည်း ကပ်ရောဂါကြောင့် ကမ္ဘာ မှာ လူတွေ ဤသို့ နေခဲ့ကြရတဲ့ ရှားပါးမှတ်တမ်းပုံရိပ်တွေ
တာမွေမှာ Mask မတပ်ဘဲ အပြင်ထွက်သူတွေကို ဒဏ်ငွေမဆောင်နိုင်ပါက ထိုင်ထလုပ်ခိုင်းနေ
လက်မှတ်ခ တွေ ပြန် အမ်းပေး ပီး ရန်ကုန်-မော် လမြိုင် ရထားများ အား ယာ ယီ ရပ် နားပြီ
ပညာရေး ဝန်ထမ်းများ ပါတီကို ယ်စားပြုသည့် အဝတ် အစားများ ဝတ်ဆင်ခြင်း မပြုရန် အကြော င်းကြား စာထုတ်ပြန်
Local News (150)
စက်တင်ဘာလ ဖွား တို့ ရဲ့ တမူ ထူးခြား ချက် များ